Words Nepal September 23, 2021
नेपाली सेयर बजारमा अहिले विभिन्न कम्पनिहरुले धमाधम आइपियो जारी गरि रहेका छ । आइपियो जारी गर्नेमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पनि अग्र पंक्तिमा आउछन । असोज छ गरे साहस उर्जाले आइपियो जारी गर्दै छ भने असोज ११ गते बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आइपियो जारी गर्दा छ । सर्वसाधारणका लागि आइपियो जारी गर्न लागेको बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेड कस्तो कम्पनी हो र आइपियोमा कति कित्ता आवेदन दिने ?
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले यही असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि ७ लाख ४४ हजार कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा १२ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन अनुमति पाएकोमा ४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानियहरुका लागि बिक्री गरिसकेको छ । भने बाकी रहेकी कुल ८ लाख कित्ता सेयरमध्ये ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र २ प्रतिशतले हुन आउने १६ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएर बाकी रहेको बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता सेयरका लागि । सर्वसाधाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको आइपियोमा सर्वसाधारणले असोज ११ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिने मिति लम्बिनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतममा ५० हजार कित्ता सम्म शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन ।
कम्पनीको आइपियो निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिभिल क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ । कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
विधा # आर्थिक अगाडी पढ्नुहोस
✍️ Words Nepal on September 23, 2021
भारतले लगाएका ४ नाकाबन्दीको नालीबेली
नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको आज ठीक ६ वर्ष पुगेको छ । २०७२ सालको असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो भने असोज ६ गतेबाट भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
धेरै नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा त्यो नाकाबन्दीकालका कष्टप्रद दिनहरू ताजै छन् । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको यो पाचौंपटक थियो । त्यसअघि विभिन्न बहानामा ४ पटक लगाएको नाकाबन्दीबारे कमै नेपालीहरूलाई थाहा छ ।
स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी र नाति राजीव गान्धीसम्मले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका छन् । नेपालतर्फ नाकाबन्दी भोग्ने पनि वंशज शाशकहरू नै परे । नेहरू र इन्दिरा गान्धीको नाकाबन्दी महेन्द्रले सामना गरे भने राजीव गान्धीको नाकाबन्दी वीरेन्द्रले ।
गान्धी परिवार नेतृत्वको सरकारले नलगाएको र नेपाली राजाहरूले सामना नगरेको एकमात्रै नाकाबन्दी २०७२ असोज ६ पछिको हो । यो नाकाबन्दीमा गणतान्त्रिक नेपालका दलहरू सत्तामा थिए । भारतमा बिजेपीको सरकार थियो ।
२०१९ सालको नाकाबन्दी कुन मितिबाट सुरू भएको भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिन्न । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले छापेको ‘अ हिस्ट्री अफ नेपाल’ पुस्तकमा जोन ह्लेप्टनले सन् १९६२ को सेप्टेम्बरबाट नाकाबन्दी सुरू भएको भनेका छन् । त्यो भनेको २०१९ को भदौ/असोज हुन आउँछ । कतिपयले भने वैशाखबाटै सुरू भएको पनि भन्ने गर्छन् ।
यस आलेखमा हामी नेपालमाथि भारतले लगाएका ४ वटा नाकाबन्दीको नालीबेली प्रस्तुत गर्दैछौं ।
१. २०१९ सालको नाकाबन्दी
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक अध्यक्ष माओ बीचमा नेपाल-चीन जोड्ने राजमार्गको बारेमा कुराकानी भएको थियो । सन् १९६० मार्च १८ (२०१६ चैत ५) मा कोइरालाको चीन भ्रमणताका भएको संवाद यस्तो थियो-
माओः हामीले सुनेका छौँ कि तपाईंहरूले हाम्रो देशलाई सीधै जोड्ने राजमार्ग बनाइरहनु भएको छ ।
वीपीः होइन । हामीले दुई वर्षअगाडि एक राजमार्ग बनाउन खोजेका थियौँ । आर्थिक अभावले अगाडि बढ्न सकेन । अहिले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउनको लागि सोभियत संघका प्राविधिकहरूले सर्भेमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
माओः हाम्रो देश (चीन) आउन तपाईं अर्काको देश भएर आउनुपर्छ ?
वीपीः होइन । हिमालयन भन्ज्याङ हुँदै नेपाल र तिब्बत जान सकिन्छ । तर, यो औपचारिक सडक भने हैन ।
माओः एक वर्षमा, १० वर्षमा वा २० वर्षमा, ढिलो वा चाँडो हाम्रो सीधा सडक हुनुपर्छ ।
वीपीः हामी हाम्रो देशमा आर्थिकरूपमा राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा सडक बनाउदै छौँ । हामी देशभर पुग्ने १३०० किलोमिटरको सडक निर्माण गर्दैछौँ ।
यसरी पहिलोपटक नेपाल-चीन सडक जोड्ने परियोजनालाई वीपीले कूटनीतिकरूपले ‘नो’ भनेका थिए । सूचना भारत नपुगोस् भनेर वीपी तर्केका हुन पनि सक्छन् ।
खैर, ‘माओ जेदुङ अन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा उल्लेखित यो संवादबाटै नेपाल-चीन सडक निर्माणको उच्चस्तरीय छलफल आरम्भ भएको बुझ्न सकिन्छ । वीपी चीन जाँदा सन् १९६० मा सीधा सडकको प्रस्ताव गरेको चीनले अर्को वर्ष वीपीलाई अपदस्थ गरेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएका महेन्द्र चीन पुग्दा सम्झौता नै गर्‍यो ।
महेन्द्रको सन् १९६१ सेप्टेम्बर २६ देखि अक्टोबर १९ सम्म भएको चीन भ्रमणको समयमा अक्टोबर १ मा नेपाल र चीनबीचमा सीधा सडक बनाउने सहमति भयो । सन् १९६२ मार्चबाट चिनियाँ प्राविधिकहरूले सर्भे थाले । सन् १९६७ को मेबाट सडक सञ्चालन भयो । यो सडक नेपाल-चीन जोड्ने प्रथम सडक मात्रै थिएन, चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने हिमाली सीमापार प्रथम सडक पनि भएको नेपाल-चीन सम्बन्ध बारेमा हालसालै बजारमा आएको पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’मा लेखक अमिसराज मुल्मीले लेखेका छन । मुल्मीले पुस्तकमा सन् १९६१ डिसेम्बरमा राज्यसभामा बोल्दै जवाहरलाल नेहरूले रोडबारेमा सुन्दा आफूले मन नपराएको बताएको लेखेका छन् ।
२०२७ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री थिइन् इन्दिरा गान्धी । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी छोरी हुन् उनी । जसरी भारतले लगाएको पहिलो नाकाबन्दीको कारण चीन थियो, दोश्रो नाकाबन्दीको कारण पनि चीन नै थियो
नाकाबन्दीको कारण नेपालले चीनसँग बनाएको सीधा सडकलाई नै मानिएको छ । तर, कतिपयले २०१९ सालको नाकाबन्दी महेन्द्रले कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेकोले भन्ने गर्छन त कसैले भने ऋषिकेश शाहलाई परराष्ट्रमन्त्रीबाट हटाइएकोले समेत भन्छन् । तर, स्वयं वीपी र शाहले त्यस बारेमा स्विकार नगरेकोले त्यो तर्क कमजोर हुन आउँछ । २०१९ मा भारतले लाएको नाकाबन्दी भारत-चीन युद्ध सुरू भएपछि सकिएको थियो । भारत र चीन सन् १९६२ अक्टोबर २० देखी नोभेम्बर २१ (२०१९ कात्र्तिक ४ देखी मंसिर ६) सम्म लडेका थिए । युद्धमा भारत नराम्रोसँग पराजित भएको थियो ।
२०१९ सालको भारतीय नाकाबन्दीताका चिनियाँ विदेशमन्त्री चेन यिले नेपालको पक्षमा बलियो आश्वासन दिएका थिए । सरदार भीमबहादुर पाण्डेको पुस्तक ‘महेन्द्र र नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति’ का अनुसार नाकाबन्दी भएको एक महिना पुगेपछि उनले २०१९ असोज १३ भनेका थिए, ‘नेपालमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने चीन हेरेर बस्दैन ।’
यति चिनियाँ बोलीले पनि नेपाललाई धेरै भूराजनीतिक आडभरोसा प्राप्त भएको थियो । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले न नेपाललाई नाकाबन्दी बढाएर हेप्न सके, न त चीनको युद्ध नै जिते । उनलाई सन् १९६२ बिर्सनलायक वर्ष बन्यो ।
२. २०२७ सालको नाकाबन्दी
२०२७ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री थिइन् इन्दिरा गान्धी । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी छोरी हुन् उनी । जसरी भारतले लगाएको पहिलो नाकाबन्दीको कारण चीन थियो, दोश्रो नाकाबन्दीको कारण पनि चीन नै थियो ।
चीनसँगको सिमानामा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन राजा महेन्द्रको रणनीतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्टले मुभ गरेपछि इन्दिरा गान्धीले नाकाबन्दी लगाइन् । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरपछि प्रधानमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको माग बमोजिम नेपाल आएको थियो भारतीय सैन्य टोली । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि वि.सं २००८ सालमा भारतीय सैन्य चोकपोस्ट नेपालका १८ वटा उत्तरी नाकाका बसे । त्यी चेकपोस्ट हटाउन राजा महेन्द्रले किर्तिनिधी विष्टलाई अघि सारेका थिए ।
विष्टले २०२६ साल असार ११ गतेको अंग्रेजी अखबार ‘दि राइजिङ नेपाल’मा अन्तरर्वार्ता दिँदै उत्तरी चेकपोस्ट हटाउनुपर्ने कुरा राखे । त्यसको एक महिनापछि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा २०२६ साउन १० गते एक संकल्प प्रस्ताव पारित भयो, जसमा भारतीय चेकपोष्टहरूको कार्यावधि सकिएकाले फिर्ता हुनुपर्ने पहल थाल्ने संकल्प थियो ।
त्यसको एक महिनापछि विष्टले भारतीय सैन्य पोष्ट फिर्ता पठाए । यसबाट भारत बिच्कियो । भारतले २०२६ सालमै नवीकरण हुनुपर्ने व्यापार तथा पारवाहन सन्धीलाई बाहाना बनायो । तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री नवराज सुवेदीले २०७२ सालको भूकम्पताका ब्रेकएनलिङ्कस डटकममा भनेअनुसार भारतले सन्धिमा बखेडा झिकेको थियो । नेपाल भन्ने- पारवाहन र बाणिज्य सन्धि फरक-फरक गरौँ । भारत भन्ने- सँगै गरौँ । २०२६ अगाडि एकै सन्धि भए पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको नभएकोले नेपालले छुट्टै माग गरेको सुवेदीले बताएका छन् । भारतीय अधिकारीहरूले तेश्रो देशबाट नभइ भारतबाटै व्यापार गर्न भनेको उनले सुनाएका थिए । कोदारी राजमार्ग निर्माण भए पनि तिब्बतबाट चीन पुग्न सात दिने लाग्ने भएकोले त्यहाँबाट सामान ल्याउन नेपालालाई समस्या थियो ।
इन्दिरा गान्धीका छोरा राजिव गान्धीले आमाको बिँडो थाम्दै २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाए । १५ महिने नाकाबन्दी २०४५ चैत १० बाट सुरू भएर २०४७ असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । यो नाकाबन्दीमा पनि चीन जोडिएको थियो ।
सुवेदीका अनुसार २०२७ सालको नाकाबन्दीबाटै सिकेर नेपालमा कपडा उद्योग खोलियो । साना र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न थालियो । साइकल चढ्न प्रोत्साहन गरियो । सुवेदीका अनुसार तत्कालीन पञ्चायतको कार्यक्रम ‘गाउँ फर्क अभियान’ का अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा केही समय साइकल चढेरै कार्यालय गएका थिए ।
२०२७ सालको नाकाबन्दीको एउटा कारण महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको व्यक्तित्व टकराबलाई पनि मानिन्छ । सुवेदीले असंलग्न राष्ट्रहरूको तेस्रो शिखर सम्मेलनको एक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । उक्त सम्मेलन २०२७ भदौ २३ देखि २५ (सन् १९७० सेप्टेम्बर ८ देखि १०) सम्म अफ्रिकी देश जाम्बियाको राजधानी लुसाकामा भएको थियो । नेपालबाट राजा महेन्द्र सहभागी सम्मेलनमा भारतबाट गान्धी सहभागी थिइन् ।
सम्मेलनमा राजाहरूको आसन अगाडि थियो भने प्रधानमन्त्रीहरूको पछाडि । महेन्द्रलाई देखेपछि हात मिलाउन इन्दिरा अगाडि आइन् । अगाडि हेरिरहेका महेन्द्रले त्यो थाहा पाएनन् वा थाहा नपाएझैं गरे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री गेहेन्द्रराज भण्डारीले इसारा गरेपछि मात्रै उनले इन्दिरालाई हात दिए । तर, आफ्नो कुर्सीबाट नउठिकन । महेन्द्रको यो रवाफिलो शैलीले भारतीय पक्ष चिढिएको सुवेदीको तर्क छ ।
२०२७ सालताका अर्थसचिव रहेका भेषबहादुर थापाले त्यसबेला भारतले घोषितरूपमै नाकाबन्दी गरेको बताउँछन । २०२८ साउन २८ (सन् १९७१ अगष्ट १३) गते व्यापार तथा पारवाहन प्रोटोकलमा नेपाल र भारतले सन्धि गरेपछि नाकाबन्दी हटेको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट नवराज सुवेदी र भारतका तर्फबाट भारतको तत्कालीन वैदेशिक व्यापार मन्त्री ललितनारायण मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो सामाग्री अझै पनि हेर्न सकिन्छ ।
३. २०४५ सालको नाकाबन्दी
इन्दिरा गान्धीका छोरा राजिव गान्धीले आमाको बिँडो थाम्दै २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाए । १५ महिने नाकाबन्दी २०४५ चैत १० बाट सुरू भएर २०४७ असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । यो नाकाबन्दीमा पनि चीन जोडिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आकाशबाट युद्ध विमान खसाउने हतियार ‘एन्टी एयरक्राफ्ट गन’ चीनबाट ल्याएको झोकमा भारतीय नाकाबन्दी लागेको थियो ।
सन १९८८ जुलाई (२०४५ साउन/भदौ) मा नेपालले चीनबाट चाइनिज एयर डिफेन्स आर्टिलरी ल्याएको थियो । चीनसँग खरिद गर्नुभन्दा १६ वर्ष अगाडि नै नेपालले भारतसँग त्यस्तै हतियार खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको तर भारतले नदिएको ‘म्युच्युअल सेक्युरिटीः अ केस अफ इन्डिया नेपाल’ पुस्तककी भारतीय लेखक तथा प्राध्यापक संगीता थपलियालले लेखेकी छिन् ।
२०७२ सालको नाकाबन्दी जस्तै यो नाकाबन्दीका बेला पनि नेपाल २०४५ सालको भूकम्पले थलिएको थियो । नाकाबन्दी लाग्दा नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए । उनले नाकाबन्दी सामना गर्न भारत बाहेकका देशहरूसँग सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । नाकाबन्दीताका बंगलादेशको राजदूत रहेका प्राध्यापक डाक्टर मोहनप्रसाद लोहनीले आफूलाई प्रधानमन्त्री सिंहले नाकाबन्दी लागेपछि नेपालबाट बेलुका साढे १० बजे फोन गरेर बंगलादेशका राष्ट्रपति हुसेन महोमद अर्सदलाई भेट्न भनेको स्मरण गरेका छन् । विष्णु रिजालले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ मा लोहनीलाई उद्धृत गरिएको छ ।
त्यसबेला रमजान पर्व मनाइरहेको भए पनि बंगलादेश नेपालले मागेजति चिनी र ५/५ मेट्रिक टन पेट्रोल/मट्टीतेल दिन तयार भएको लोहनीले बताएका छन् । तर, नेपाली बजारमा १६ रूपैयाँ पर्ने मट्टीतेल बङ्लादेशबाट नेपाल ल्याउँदा प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ पर्न गयो । धेरै उपभोक्ताले त्यो मूल्यमा किन्न सकेनन् । १००० मेट्रिक टन ल्याएर बाँकी नेपालले ल्याएन ।
तत्कालीन पञ्चायतलाई ढाल्न सक्रिय नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यस्तै कुरालाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहे । उपभोक्तलाई ठगेको, भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको देखि प्रजातन्त्र हनन गरेकोजस्ता मुद्दा अघि सारेर दलहरूले सरकारविरोधी आन्दोलन तीव्र बनाए । अन्ततः २०४६ चैत २६ मा तीन दशक चलेको पञ्चायत ढल्यो । राजा वीरेन्द्र बहुदल मान्न तयार भए । बहुदल आएर २०४७ वैशाख ३ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । नाकाबन्दी खुल्न भने थप तीन महिना लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पञ्चायतकालमा किनिएको एन्टी एयर क्राफ्ट गनको कृष्णप्रसाद भट्टराईले बचाउ गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा अडान देखाएका थिए । भारतीय पत्रकारको प्रश्न सामना गर्दै उनले भारतले नदिएको चिज चीनसँग सहज र सस्तो पाउँदा किन्नु सामान्य भएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सबै सरकारलाई हतियार आवश्यक हुन्छ । मैले डकुमेन्टहरू हेरेँ । तर, भारतले कोटेसन गरेको दाम चीनको भन्दा पाँच गुणा बढी थियो ।’
अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालको हालसालै आएको पुस्तक ‘नेपाल्स इन्ट्याबिलिटी कन्ड्रम’ पुस्तकमा यो प्रसंग छ ।
जसरी २०२७ सालको नाकाबन्दीमा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको व्यक्तित्व टकरावलाई जोडिएजस्तै कतिपयले २०४५ सालको नाकाबन्दीलाई राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीको व्यक्तित्वको लडाइँसमेत भन्छन् । ऋषिकेश शाह अध्यक्ष हुँदाको नेपाल विश्व परिषद्का उपाध्यक्ष भएका तथा पुर्वराजदूत प्राडा मोहनप्रसाद लोहनीका अनुसार नाकाबन्दी लगाएर यूरोप पुगेर आएका गान्धीले राजा वीरेन्द्र भेट्न खोज्दा ‘राजा र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल’ नमिल्ने भन्दै वीरेन्द्रले भेट दिएका थिएनन् ।
यस्तो टकराब पाकिस्तानमा सन् १९८८ डिसेम्बर २९ देखि ३१ सम्म चौथो सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा पनि देखिएको थियो । तत्कालीन पाकिस्तानका लागी नेपाली राजदूत तथा पुर्व प्रधानसेनापति अर्जुननरसिंह राणाले ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ पुस्तकमा यसको जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन, ‘कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग भेटघाटका सन्दर्भमा केही असमझदारी रहन गएकोले चिसोपन उत्पन्न भएको थियो ।’
कतिपयले २०४५ सालको नाकाबन्दीको अर्को कारणका रूपमा राजीव गान्धी पत्नी सोनिया गान्धीलाई नेपाल भ्रमणताका गैरहिन्दू भनेर पशुपतिमा पस्न नदिइएको प्रकरणलाई पनि औंल्याएका छन् । सन् १९८८ डिसेम्बरमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आफ्नी इटालीयन मुलकी श्रीमती सोनिया गान्धीसँगै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नेपाल आए । त्यसबखत सोनियाले पशुपतिनाथ प्रवेश गर्न चाहँदा भारतीय पुजारी रहेको पशुपतिमा उनलाई अनुमति दिइएन । मुलभट्ट सुप्रमण्यले प्रवेशमा निषेध गरेको पत्रकार युवराज घिमिरेले लेखेका छन् ।
नेपालमाथि लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीमा सबैभन्दा कठोर र धेरै चर्चा पाएको २०४५ सालकै हो । नाकाबन्दीको समाचार न्यूयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टदेखि लज एन्जलस टाइम्स जस्ता अमेरिकी अखबारमा समेत प्रकाशित थिए । सन् १९८९ अप्रिल १० मा लज एन्जस टाइम्सका लागि मार्क फिनमेनले हेडलाइन बनाएका थिए, ‘व्यापार नाकाबन्दीले चौपटः भारतसँग नझुकेकोमा नेपालको मुल्य चुकाउँदै ।’ समाचारमा नेपालले भारतीय व्यापारी र नागरिकलाई पहिले जस्तो सुविधा नदिनेमा सोचिरहेको उल्लेख थियो ।
४. २०७२ सालको नाकाबन्दी
२०७२ असोज ३ मा नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक संविधानभसाबाट संविधान जारी गर्‍यो । संविधान जारी गर्नु तीन दिनअगाडि नेपाल आएका भारतका विदेशमन्त्री तथा तत्कालीन विदेश सचिव एस. जसशंकरले संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिए । तर, नेपाली नेताहरूले मानेनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्र नभएर तत्कालीन चौथो ठूलो दल राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेशवादी पार्टीका विजयकुमार गच्छदार एक भएर संविधान जारी भयो । असोज ३ मै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्ट भएको जनाउ दियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा संविधानलाई ‘नोट’ गरेको र ‘भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हिंसा भएको’ भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टी र नाकाबन्दी लाउने संकेत एकैपटक देखायो ।
वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘आज नेपालमा जारी भएको एक संविधान हामीले नोट गरेका छौँ ।’ त्यसमा थपिएको थियो, ‘भारतीय सीमा जोडिएका विभिन्न भागहरूमा हिंसाहरू बढिरहेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।’
त्यसको तेश्रो दिनबाट भारतले अघोषितरूपमा नाकाबन्दी लगायो । असोज ६ बाट नाकाबन्दी सुरू भयो । यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकरूपता दखिएन । नेपाली कांग्रेसले औपचारिकरूपमा नाकाबन्दी भनेन । मधेशकेन्द्रित केही दलहरू र नागरिक अभियानकर्मीहरू नाकाबन्दीलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी सीमा नाकामा धर्ना बसे । अरु पार्टीहरूले नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे ।
बीबीसीदेखी न्यू योर्क टाइम्स हुँदै अलजजिराजस्ता विश्व मिडियाले ‘नाकाबन्दी’ नै भनेका छन् । काठमाडौं पोस्टका तत्कालीन सम्पादक अखिलेख उपाध्यायले न्यू योर्क टाइम्समा सन् २०१५ नोभेम्बर ६ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको भनेर लेख लेखेका थिए । विश्वभरका नेपालीहरूले भारतीय दूतावास अगाडि जुलुस निकाले । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण हुँदा त्यहाँ पनि नेपालीहरूले प्रदर्शन गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमललगायतले ‘अकाउन्ट्याबिलिटी वाच कमिटी’ को तर्फबाट नाकाबन्दीको नागरिकस्तरबाट विरोध गरे । भारतलाई नागरिकस्तरको व्यापक दबाब र विश्वव्यापी बन्यो ।
भारतले भने आफूले नाकाबन्दी गरेको नभए सीमामा अवरोध भएकाले सामान आपूर्ति गर्न नसकेको बयान दिइरह्यो । तर, तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय सदनमा सांसदहरूले प्रश्न गरेर हैरान गरेपछि घुमाउरोरूपमा नाकाबन्दी भएको भन्न बाध्य भएकी थिइन् । २०७२ मंसिर २१ गते सोमबार भारतको राज्यसभामा बोल्दै उनले ‘नेपालमाथि पहिलोपटक नाकाबन्दी नभएको’ तर्क गरेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन, ‘राजिव गान्धीको सरकारको पालमा पनि नेपाललाई नाकाबन्दी भएको थियो ।’
२०७२ को नाकाबन्दी ६ महिनासम्म चलेर रोकिएको थियो । भारतले तनाव दिएपछि चीनको विकल्प खोज्ने नेपाली परम्पराको निरन्तरता ओलीले पनि दिए । तर, योपटक उनी आग्रहमा मात्रै सिमित नरही सन्धि नै गरे । उनले चीनसँग इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे ।
असोज ६ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लाउँदा संविधान जारी भएको ३ दिनमात्रै भएको थियो । प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला । कोइरालाले संविधान बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए । संविधान बनेपछि कोइराला सहमतिमा अडिएनन् । फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने । उनलाई भोट हाल्न संविधानसभा बहिष्कार गरेका उपेन्द्र यादवहरूको टिम पनि संविधानसभामा आएको थियो । कतिपय कांग्रेस नेताहरूले भने संविधानसभा छोडेर हिँडेको टोलीलाई संविधानको फोरममा ल्याउन कोइरालाले उम्मेद्वारी दिएको तर जित्न बल नगरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
भारतको नाकाबन्दी सुरू भएको तेस्रो हप्ता लागेपछि २०७२ असोज २४ गते ओली र कोइरालाको प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा भयो । कोइरालालाई हराएर ओली प्रधानमन्त्री बने । ५८७ मत खसेकोमा ओलीले ३३८ मत पाए । कोइरालाले २४९ मत पाए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई हराएर एमाले अध्यक्ष भएका ओलीले एमालेको संसदीय दलको नेतामा पनि तत्कालीन पार्टी प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई हराएका थिए । छोटो समयमा विभिन्न मोर्चामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हराएर आएका ओलीले खुलेर नाकाबन्दीको विरोध गरे ।
२०७२ चैत ८ (२०१६ मार्च २१) मा चीन भ्रमणमा गएका ओली र उनका समकक्षी लि केकिङबीचमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरेका ओलीले आफ्नो दोश्रो प्रधानमन्त्री कालमा चीनसँग उक्त सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान २०७६ वैशाख १६ (२०१९ अप्रिल २९) मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको उपस्थितिमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री सि स्याओपेङले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
चीनसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि ओलीले गरेपछि दवावमा आएको भारत थप सहुलियत दिन तयार भयो । कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहमात्रै दिएको भारतले पछि विशाखापटनम पनि दियो । पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थितरूपमा नेपालमा ल्याउन ओली र मोदीले २०७६ भदौ २४ (२०१९ सेप्टेम्बर १०) मा संयुक्त रूपमा पाइपलाइन उद्घाटन गरे । भारतको विहारदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन भएको थियो । पाइपलाइनको ३६ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा पर्छ ।
माथिका ४ नाकाबन्दीबाहेक भारतले नेपालमाथि अर्को एउटा बन्देज सिर्जना गरेको घटना पनि स्मरणीय छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमबाट असन्तुष्ट भएर भारतले नेपालमा सैन्य सामाग्रीको आपूर्ति बन्द गरेको थियो, जसलाई कतिपयले ‘सैन्य नाकाबन्दी’ भन्ने गर्छन् ।
त्यसताका अहिलेकै शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे र शासन आफ्नै हातमा लिए । संवैधानिक राजाबाट उनी प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजा बने । त्यही बहानामा भारतले अघोषितरूपमा सैन्य नाकाबन्दी लायो ।
नाकाबन्दी लाउने संकेत भारतले विभिन्न घटनाक्रमबाट दिएको थियो । जस्तो ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको पाँच दिनपछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सन् २००५ फेब्रुअरी ६ बाट हुने तय भएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नजाने भए । बंगलादेशले बाध्य भएर सम्मेलन स्थगित गर्‍यो । सार्क प्रकरणभन्दा दुई दिन अगाडि नेपाल भ्रमण तय भएको भारतका तत्कालीन सेनापति जेजे सिंहले आफ्नो निर्धारित नेपाल भ्रमण रद्द गरे ।
ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणलाई लिएर भारतले कूटनीतिक प्रतिक्रिया पनि कडा दिएको थियो । साउथ ब्लकले लेखेको थियो, ‘भारतले नेपालको संविधानको मान्यताअनुरूप संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नेपालको दुई खम्बे स्थायित्वको रूपमा निरन्तर समर्थन गरेको छ । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार बनाएसँगै त्यो सिद्धान्त अहिले मिचिएको छ । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू र राजतन्त्रलाई मुठभेडमा ल्याएको छ ।’
४ नाकाबन्दीबाहेक भारतले नेपालमाथि अर्को एउटा बन्देज सिर्जना गरेको घटना पनि स्मरणीय छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमबाट असन्तुष्ट भएर भारतले नेपालमा सैन्य सामाग्रीको आपूर्ति बन्द गरेको थियो, जसलाई कतिपयले ‘सैन्य नाकाबन्दी’ भन्ने गर्छन् ।
यसरी वक्तव्यदेखि व्यवहारबाट भारतले राजाको प्रत्यक्ष शासनले नेपालको संविधानको हनन् भएको भन्दै सैन्य सामग्री बिक्री बन्द गर्‍यो । सन् १९५० को सन्धिको धारा ५ मा नेपाली सेनाले भारतबाट आफ्ना सैन्य सामग्री किन्ने प्रावधान रहेको छ । राजालाई नेपालको संविधान मिचेको आरोप लाएको भारतले नेपाल-भारतको उक्त सन्धि मिच्यो । भारतले त्यस्तो अवस्थामा ‘सैन्य नाकाबन्दी’ लगायो, जुन अवस्थामा नेपालमा नेपाली सेना माओवादी लडाकुसँग देशभर भिड्दै थियो । विभिन्न देशी-विदेशी हतियारबाट सुसज्जित माओवादी लडाकुसँग लड्न आवश्यक हतियार भारतले नदिएर तनाव दियो ।
भारतीय तनाव झेलेपछि चीनतिर फर्कने नेपाली सत्ताधारी परम्परा ज्ञानेन्द्रले पनि पछ्याए । चीनले खुलेर सहयोग गर्‍यो । चीनले सैन्य नाकाबन्दी भएकै वर्ष ९ लाख ८९ हजार डलर सैन्य सहयोग गरेको अवकासप्राप्त मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको एक डकुटेन्टले सैन्य नाकाबन्दी भएकै वर्ष सन २००५ नोभेम्बरमा चीनबाट अठार ट्रक सैन्य सामग्री नेपाल आएको उल्लेख छ ।
भारतको सैन्य नाकाबन्दी २०६१ माघदेखि २०७० असारसम्म रह्यो । २०७० असार २५ गते भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल भ्रमणमा आएपछिमात्रै औपचारिकरूपमा खुलेको भारतीय अखबार इन्डिया टूडेले लेखेको छ । भारतीय सैन्य नाकाबन्दी करिब ८ वर्ष चल्यो । यसलाई धेरैले नाकाबन्दी भन्दैनन् । तर, नेपाल-भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिले अनिवार्य गरेको कुरा बन्द गरेकोले नाकाबन्दी मान्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । हालसालै नयाँ पुस्तक ‘नेपाल्स इन्स्ट्याबिटिली कननड्रम’ का लेखक तथा अवकाशप्राप्त मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालले यसलाई नाकाबन्दी भनेका छन् ।
विधा # बिबिध अगाडी पढ्नुहोस
अध्ययनका लागि दुबई ? यी हुन् थाहा पाउनै पर्ने जानकारी
सामान्यतया अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका र यूरोपियन मुलुकहरू पर्दै आएका छन् । तर विद्यार्थीले यी उल्लिखित देशहरूकै दाँजोमा शैक्षिक गुणस्तर दुबईमा पनि पाउन सक्छन् । त्यो पनि यी देशहरूको तुलनामा केही सस्तो मूल्यमा । त्यसो त दुबईमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीले माथि उल्लिखित देशहरू जत्तिकै दरमा खर्च गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर केही त्यस्ता विषय र कलेजहरू छन्, जो मध्यमवर्गीय नेपाली विद्यार्थीका लागि रोजाइमा पर्न सक्छन् ।
विद्यार्थीले दुबई अध्ययनको लागि गइसकेपछि करीब दुई महीनाभित्र ‘वर्क पर्मिट’ पाइसक्छन् । र, वर्क पर्मिट भइसकेपछि उनीहरूले दुबईको जुनसुकै सेक्टरको हरेक तहमा -आफ्नो क्षमताअनुसार) काम गर्न सक्छन् । यसरी वर्क पर्मिट पाएर काम गर्ने विद्यार्थीको लागि अर्को गज्जबको कुरा के हो भने, नेपालबाट वर्किङ भिसामै गएर काम गरिरहेका सामान्य कामदारको तुलनामा बढी कमाइ हुन्छ । र, कामको सवालमा विद्यार्थी केही स्वतन्त्र पनि हुन्छन् ।
तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापन संकायका कक्षाहरू दुबईमा सस्तो पर्छन् । हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, आईटी, स्पोर्टस् म्यानेजमेन्ट जस्ता विषय अध्ययनका लागि दुबई उत्कृष्ट गन्तव्य हो । त्यो बाहेक विद्यार्थीले फिल्म डाइरेक्सन, प्रोडक्शन म्यानेजमेन्ट जस्ता विषय पनि दुबईमा अध्ययन गर्न सक्छन् । विशेषगरी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र स्पोर्टस् म्यानेजमेन्टमा विश्वमै दुबई अग्रणी देश हो, त्यसैले यी विषय अध्ययन गरिरहँदा विद्यार्थीले त्यहाँका विज्ञहरूको टीममा सहभागी भएर काम गर्न पाउने अवसर पनि रहन्छ ।
विधा # शैक्षिक अगाडी पढ्नुहोस
केहि दिन अघिसम्म पनि नेप्सेमा खासै कारोबार नहुने म्युचुअल फण्डहरुको मूल्य एकाएक बढ्नु र कारोबार रकममा समेत बृद्धिहुनुको प्रमुख कारण भनेको नै दुबै म्युचुअल फण्डाका योजनाहरुले सार्वजनिक गरेको लाभांश रहेको कतिपयको बिश्लेषण छ ।
केहि दिन अघि मात्र २ म्युचुअल फण्डहरुले ३० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेका थिए । बुलिस ट्रेन्डमा अधिकांश म्युचुअल फण्डका योजनाहरुले राम्रो मुनाफा हाँसिल गर्न सफल भएकाले पनि उनिहरुले राम्रो मुनाफा वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।
नेपालका कतिपय म्युचुअल फण्डहरु त उनिहरुको न्याभको तुलना डिस्काउन्टेड मूल्यमा नै रहेकोले पनि म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको देखिन्छ । अबको केहि समयमै करिब सबै म्युचुअल फण्डका योजनाहरुले लाभांश घोषणा गर्ने भएकाले १ बर्ष अघि सुरु भएका योजनाहरुमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका हुन् ।
अहिले बजारमा म्युचुअल फण्डको चर्चा भइरहँदा कतिपय नयाँ प्रबेश गरेका लगानीकर्ताहरुमा म्युचुअल फण्ड भनेको के हो यसमा कसरी लगानी गर्ने यसले कसरी प्रतिफल दिन्छ भन्ने अन्योलता देखिन्छ ।
१.लगानीमा विविधिकरण (Diversification In Investment): म्युचुअल फन्डको लगानी विविध क्षेत्रमा गरिएको हुन्छ जसले जोखिम न्युनिकरण गर्न मद्दत पुग्दछ।
२. तरलता (Liquidity) : खुलामुखी फन्डका लगानीकर्ताले तोकिएको समय अविधिभरमा बिक्री गर्न सकिन्छ जुन प्रतियुनिट कूल सम्पति मूल्य (Net Assets Value Per Unit) कै बराबर हुने गर्दछ। यस्ता फन्ड तरल सम्पति हुन्।
३. लगानीको कुशल व्यवस्थापन (Proper Investment Management) : म्युचुअल फन्ड कम्पनीले लगानीगर्दा अनुभवी पोर्टफोलियो व्यबस्थापकलाई अ‍ौपचारिक रूपले लगानीको जिम्मेवारी दिएका हुन्छन जसले वृहत खोज र अध्धयन गरी निर्णय गर्दछन्।
४.सरकारको नियमन तथा पार्दशिता (Government Convinience and Transperancy) : म्युचुअल फन्डले सरकारी निति र कानुन बमोजिम कार्य गर्नुपर्दछ र सरकारले यस्ता कम्पनीको नियमन गर्दछ। आवश्यक परेमा सरकारले नितिनियम परिमार्जन एवम् बद्लाव गर्दछ। त्यसका साथै वित्तिय विवरण, आयव्यय विविरण जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको पार्दशिता निश्पक्ष रूपले यी कम्पनीले खुलासा गर्दछन्।
प्रकाश पौडेल - नेपाली कमरेड
लडाइको मैदानमा सिपाही लाइ बर्दी मात्रै मा उभ्याउदा उ कमजोर ठहरिन सक्छ तर हतियार सहित पठाए उस्ले जित्छ, बर्दीले आत्माबिस्वास बढाउछ भने हतियार ले जित दिलाउछ। राजनीति र युद्दमा तात्विक भिन्नता खासमा केहि छैन। जितका लागि ठुलो समूह भन्दा पनि जिम्मेवार, बलियो र सहकार्यमुलक संगठन आवास्यक हुन्छ, त्यही महसुसु भएको छ। बौद्दिकता एक किसिमको हतियार हो तर भौतिक सहायता बिना बौद्दिकता पनि अचल रहन्छ तसर्थ युद्द जित्नको लागि सर्बगुण प्राय सबैमा नहुन सक्छ।
एउटा मान्छे नेता कसरी बन्छ ?
नेता बन्न सक्ने जुनुन जो कोहिमा कहा हुन्छ र, राजनीति पूर्णकालीन सेवा हो जसबाट लाभ लिन खोज्ने जो कोहि को पतन निस्चित हुन्छ। व्यक्तिगत जीवनलाई त्याग्न नसक्ने मान्छे नेता बन्न सक्ने कल्पना गर्न सकिदैन। नेता बन्ने गण कसैले जन्मजात लिएर आउने कुरा त पक्कै होइन।
नेता बन्नकैलागि कलेज पुग्नेहरु विभिन्न सङगत ले डोरिन्छन र पदमा पुग्छन तर केही अपबाद हुन्छन जो जेहाद छेडेर निस्किन्छन, त्यो एउटा उदाहरण हो प्रकाश पौडेल। मालाई राम्रो संग याद छ संगै हिडेका प्रतिद्वोंदीहरुलाई चाकडिबाज र चाप्लुशीका बाबजुद सबैलाई पछार्दै केन्द्रसम्मको राजनैतिक यात्राले यो कुरा प्रस्ट पारेको छ। यसकुराले हामीलाई पनि राजनीतिमा इमान्दारिता र लगनशीलताको अस्थित्व छ भन्ने कुरामा बिस्वास लाग्न थालेको छ।
२०६० साल तिर पुलाचौर मा एक घर सेनाले घरेको थियो, सबै खान तलासी भैरहेको थियो। गाउले र सेना बीच विवाद भैरहेको थियो। खानतलासीको कारण चाहि एक आरोप थियो गाउमा कसैले यो घरमा माओवादी को हतियार छ भनेर सेनालाई सुराकी गरेको रहेछ। यो घटना प्रकाशको मस्तिस्कमा यसरि बस्यो कि जसको कारण प्रकास अहिले जहाँ जहाँ अन्याया भएको छ त्यहाँ उपस्थित देखिन्छन् ।
कुरा हाम्रो बाल्यकालकै हो हाम्रा घरहरु फरक गाउमा भएपनि हामी सम्बन्धले एकादमै नजिक छौ। प्रकाश को घर मालाइ र मेरो घर प्रकाशलाइ एकदमै प्यारो लाग्दछ, सायद त्यसैले बाल्यकालका खेलहरु हामी संगै खेल्थ्यौ। उनलाई सधैँ आफ्ने समुहलाई न्यायपूर्ण ढंगले जिताउनु पर्ने र खेलमा कसैले पनि झ्याली गर्न नपाउने कुरा मन पर्दथ्यो । बाल्यकालको त्यो मिठो संगत बिचमा केहि समय छुटेपनि फेरी हाम्रो सङ्गत म्याग्दी क्यम्पस पढ्दा जोडियो। जब म्याग्दी क्याम्पसको क्यान्टिनमा चिया र समोसा खान्थ्यौ तब प्रकाश हाम्रा बाल्यकालका यादहरुलाइ ताजा हुने गरि जिस्काउथे । टाढा भएपनि मेरा सबै क्रियाकालापहरुमा नजर पुग्दो रहेछ, मेर बिद्यार्थी राजनीतिलाई नियालीरहेका प्रकाश बेला बेला मलाइ हौसला दिइरहन्थे। सानैदेखिको बिद्रोही स्वाभाव भाएको प्रकाशमा नेतृत्व क्षमाता बाल्याकाल्देखिनै भएको कुरा मैले हामि संगै अध्यान गर्दा महसुस गरको थिएँ।
साधारण घरमा भएको त्यो हमलाले नै प्रकाशलाइ राजनीतिमा डोर्‍याउने मार्ग बनाएको रहेछ। बाल्यकालदेखि कै संगत भएकोले म स्वयम् पनि जानकार रहेपनि बास्ताबिकता खोज्दै जाँदा धेरै कुराहरु मैले आफै पत्ता लगाए भने कति कुरा हाम्रा भलाकुशारीबाट पत्ता लागे। तैपनि यो सबै बास्तबिकता प्रकशले सायदै कसैलाई भनेका होलान। बालासाखा साथीहरू छोडेर हिडन पर्ने कस्ले बनायो भनेर खोज्दा खोज्दै ७ कक्षा मा पढने बेला उनी अखिलको सम्पर्कमा पुगेको कुरा मैले उतिखेरै जानाकारी पाएको थिए। हामीलाई राजनिती भन्दासाथ डर लाग्ने त्यो स्थितिमा अखिलको योद्दा बनेको प्रकाशले हामिजस्ता बिचलित बिद्यार्थी लाइ राजनीति के हो भनेर बुझ्न सक्ने गरि प्रस्तुत भैरहेका छन। बिपत्ति मा सेवा अनि बिभेगदमा बिद्रोह गर्ने कुरा उनले सार्बजनिक गरेका छन ।
७२ सालको भूकम्पमा राहत बोकेर गोरखा पुगेको प्रकाशले देशका जुनकुनै कुनामा बिपत्ति आइलाग्दा नपुगेको क्षेत्र देखिदैन। अशल काममा सबैको साथ हुदो रहेछ। जब प्रकाश सुरु गर्छन तब युवाहरु राजनैतिक आस्था भन्दा मनबिय धर्म ठुलो देख्छन र साथ् दिन्छन यस्ता कति उधारण छन् जुन जो कोही म्याग्देलीलाइ सोधेपछि थाहा भैहाल्छ । प्रकाश अहिले नेता भन्दापनि जनताको बिस्वास बनेका छन् र म्याग्दी, गण्डकी हुदै नेपालकै बिस्वास बन्ने बिस्वास मा संग संगै हरेक म्याग्देलीले लिएका छन्।
२०७२ तिरको कुरा होला, नाकाबन्दीले देश ठप्प हुँदै थियो भारतप्रती सबैको कडा गुनासो बढिरहेको थियो। २०७२ साल असोज ५ गते साँझा म्याग्दी बेनिमा एक्कासी कडा चलपहल निस्कियो अग्र मोर्चामा थिए प्रकाश सयौ विद्यार्थीले मोदिको पुत्ला जलाए सम्बत त्यो नै नाकाबन्दि विरुद्धमा मोदिको देशमा जलेको पहिलो पुत्ला थियो। त्यसपछि अखिलले जनताको आवस्यकता लाई मौका मानेर कालोबजारी गर्ने ब्यापारीक गोदाममा धावा बोल्न थाल्यो। भ्रस्टाचारि लाई खुलेआम छोपेर अख्तियार लाई बुझौउने जस्ता कार्य भए, लुकाएका सिलिण्डर बिद्यार्थीका/ जनताका चुलोसंग जोडिए।
डुबानले तराइ डुब्दा मधेस झरेर हप्तौ त्यहाका जनता लाई सेवा गर्ने, हावाहुरीले तराइ दुख्दा तत्काल पुगेर हप्तौ सम्म स्वयंसेवक बनेर काम गर्ने, बाढी पहिरो र नागरिकलाइ बिपत्ति हुदा ज्यान हत्केलामा राखेर आफ्नो टिम को अगुवाइ गरि फिल्डमा पुगेर काम गर्ने, कोरोनाको जोखिमले अस्पतालहरुमा बेड नहुदा रातभर नसुतेर अस्पताल ब्यबस्थापनमा खटने, आदि र यस्ता कुरा सबै लेख्ने हो भने कति हो कति छन्। सेवामा दृढता का साथ उभिने कोमल मनका अनि मुद्दा अनुसार चट्टान बनेर उभिने प्रकासका अनेक रुप छन।
स्कुले जीवनमा नै अखिलको जिल्ला कमिटीमा प्रबेश गरिसकेकोले प्रकाशको पार्टिमा परिचय बनिसकेको थियो। कलामा पोख्त थिए त्यसैले २०६४ को निर्बाचनमा जिल्लाभर कलाकार को रुपमा उनले भुमिका खेलेर आफ्नो बलियो स्थान बनाइसकेका थिए। शब्द शब्दमा उर्जा देखिने प्रकाशका गीतहरुले बस्ति हरुका आवाज बोल्दथे र आवाजविहीनलाइ पनि आवाज उठाउन प्रोत्शाहन गर्दथे। कलिलो स्वरमा गाइएका क्रान्तीकारी शब्दहरुले बस्ति हरु नै भाबुक हुन्थे र जुझारु मुठी उठथे। ११/१२ कक्षा को जिवनमा प्रकाश अनेरास्ववियु को प्रभाबशाली जिल्ला स्तरको नेता बनिसकेका थिए। सङठनले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी फत्ते गर्ने बानिले उनलाइ रकेट लिडरको रुपमा उभ्याइरहेको थियो। सङठनमा सदस्य हरु थप गाउँ-गाँउमा सङठन बिस्तार गर्दा उनको पकड बनिरहेको थियो।
स्कुले जिवनमै हुदा पोखरा महाधिवेशनमा पनि उनको प्रतिनिधित्व छनोट भएको थियो तर स्कुले परिक्षाले रोकिएका थिए। २०६६ सालमा जनपुरमा भएको पहिलो महाधिवेशनमा प्रकाश अनेरास्ववियु म्याग्दिमा निर्बाचन मार्फत प्रतिनिधि छनोट भएर जनकपुर लागे। त्यसपछि सङठनमा उनले थप कठोर समयको सामना गर्नुपर्यो।
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा धेरै चर्चित आन्दोलनहरुको नेतृत्व प्रकाश पौडेलले गरेका थिए। त्यस मध्य बाहिरका ट्युसन इन्सिच्युट बन्द गरेर कलेजमा सुलभ दरमा कोचिङ्ग पढाउने आन्दोलनले चर्को रुप लिएको थियो। प्राध्यापक हरु कलेजमा थुनिने परिस्थिति बनेको अवस्थामा बिद्यार्थीको माग र परिस्थिति अनुरुप क्याम्पस भित्रै सुलभ अतिरिक्त कक्षा संचाना गर्ने सम्झौता संगै त्यो आन्दोलन अन्त्य भएको थियो। त्यसैको जगमा आजपनि म्याग्दी क्याम्पसमा सहज र सुलभ अतिरिक्त कक्षा संचालन हुनेकुरा त्यहा अध्यनरत बिद्यार्थी ले जानाकारी दिए।
१८ बर्षकै हुदा उनले २०६९ सालमा अनेरास्ववियु को जिल्ला अध्यक्ष मा कडा टक्कर दिए भलै त्यो हलमा उनलाइ सदस्य पनि नराखी कमिटी बनाइयो। उग्र माहोललाइ शान्त बनाएर गाउँ गाउँ बाट आएका प्रतिनिधि लाई बिदाइको हात हल्लाएर अर्को अधिबेशनमा अध्यक्ष को उम्मेद्बारी घोषणा गरेर उनी आफ्नो बाटो लागे। सकृयताले निश्कृयतालाइ बिस्तापित गरेरै छोडछ भनेझै २०७१ सालमा अनेरास्ववियु को जिल्ला अध्यक्ष २० बर्षकै उमेरमा बनेर इतिहास रचेका प्रकाश सङठनलाइ कडा रुपमा चलायमान बनाउदै देशकै उत्कृष्ट कमिटी मध्य म्याग्दी लाई पुरस्कृत गराए । यी सब कुरालाई मानले नियाल्दै म चै मनमनै प्रकशको नेत्रित्वको प्रसंसक बनिरहेको थिए।
२०७२ मा भएको अखिल महाधिवेशन झनै कडा रह्यो। प्रकाशले अनेक षड्यन्त्रका बिचबाट केन्द्रिय सदस्य निर्बाचित भए। प्रकाश लाई मत नदिन केही प्रतिनिधि लाई लाखौ रुपियाको अफर गरेको कुरा म्याग्दिमा त्योबेला चर्चित थियो। सङठनको जिवनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धामा रहेका धेरैलाइ सम्झाएर अनि कतिपयलाइ जितेर प्रकाश आजको स्थान सम्म आएका हुन्।
प्रकाशको दृढ अटोठ कायम रहेमा गण्डकी प्रदेशको विद्यार्थी आन्दोलन नया उचाइमा पुग्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन।
Words Nepal September 17, 2021
विधा # इतिहास अगाडी पढ्नुहोस
✍️ Words Nepal on September 17, 2021
विश्व–मानव जातिलाई प्रज्वलित गर्न सफल कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रक्षेपणको १३३ वर्ष, पेरिस कम्युनको ११० वर्ष, अक्टोबर क्रान्तिको ६४ वर्ष र चिनिय...
नेपाली सेयर बजारमा अहिले विभिन्न कम्पनिहरुले धमाधम आइपियो जारी गरि रहेका छ । आइपियो जारी गर्नेमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पनि अग्र पंक्तिमा आउछ...
नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको आज ठीक ६ वर्ष पुगेको छ । २०७२ सालको असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान ज...
अध्ययनका लागि दुबई ? पहिलोपटक जो-कोहीलाई पनि यो प्रश्न मनमा आउन सक्छ । कारण, धेरै नेपाली युवा कामका लागि दुबई गइरहेको हामीले देखेका छौं । तर...
अभिलेखबाट थप May 2021 (11) June 2021 (18) September 2021 (12)
शब्दपाटी - गोपनियता
© २०२१ - शब्दपाटी